တံမြက်စည်းပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကိုင်းဘော (ခေါ်) ပြောင်စာပင်များကို ဈေးကောင်းပေးဝယ်ေ? - Yangon Media Group
တံမြက်စည်းပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကိုင်းဘော (ခေါ်) ပြောင်စာပင်များကို ဈေးကောင်းပေးဝယ်ေ?
ကလေး၊ မတ် ၁၇
တံမြက်စည်း ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့်စစ် ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေး-တမူး ကားလမ်းတစ်လျှောက်နှင့် ချင်း ပြည်နယ်တောင်စောင်းများ၌ အ လေ့ကျပေါက်ရောက်နေသည့် ကိုင်းဘော(ခေါ်) ပြောင်စာပင်များ ကို ယခုအခါဝယ်ယူသူများပြားနေ သောကြောင့် အဆိုပါဒေသများ မှ ဒေသခံများအလုပ်အကိုင်များ ရရှိကာ ဝင်ငွေကောင်းနေကြ ကြောင်းသိရသည်။ ကိုင်းဘော(ခေါ်)ပြောင်စာ ပင်များကို ယခုအခါကလေး၊မုံရွာ၊ ပခုက္ကူနှင့်မန္တလေးမြို့တို့မှ တံမြက် စည်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများက ဝယ်ယူမှုများပြားနေသည်။
ကလေး၊ ချင်းတောင်ဒေသရှိ ကိုင်းဘောခေါ် ပြောင်စာခုတ်သူ များမှာ ယခုရက်ပိုင်းတွင် တစ်ရက် လျှင်ကျပ် ၆ဝဝဝမှအချို့ငွေကျပ် သောင်းဂဏန်းဝန်းကျင်အထိ ရရှိ နေကြပြီး ကလေးမြို့ရှိပြောင်စာ ပင်အဝယ်ဒိုင်များတွင် တစ်ပိဿ လျှင်ကျပ် ၁ဝဝ ဖြင့်လည်းကောင်း အချို့က ကျပ် ၂ဝဝ ဖြင့်လည်း ကောင်းအပင်အနေအထားပေါ်မူ တည်၍ ဝယ်ယူနေကြသည်။ ”ကျွန်တော်တို့ ပြောင်စာပင် ဝယ်ယူရာမှာ အပင်အနု၊ အလတ်၊ အရင့်ဆိုပြီးဝယ်ယူအခြောက်ခံပြီး မှ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနဲ့မြန်မာပြည် အရပ်ရပ်က တံမြက်စည်းလုပ်ငန်း ရှိတဲ့နေရာတွေကိုရောင်းတယ်”ဟု ပြောင်စာအရောင်းအဝယ်လုပ်သူ ကုန်သည်ကိုသန်းလွင်က ပြော သည်။
ကလေးမြို့ပေါ်၌ ပြောင်စာ ပင် တံမြက်စည်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် နေသည့် အလုပ်ရုံ ၁ဝရုံဝန်းကျင် ရှိနေပြီး ကလေးမြို့မှပြုလုပ်သည့် တံမြက်စည်းများကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံ မဏိပူရပြည်နယ်၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ် များသို့ တင်ပို့ရောင်းချသည်။ ယခုရက်ပိုင်း ကလေးမြို့တွင် တံမြက်စည်းတစ်ချောင်းလျှင် ကျပ် ၁ဝဝဝဖြင့်အရောင်းအဝယ် ဖြစ်နေ ပြီး အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်ဈေး တွင် တစ်ချောင်းလျှင်ကျပ် ၁၅ဝဝ ဖြင့်ရောင်းချကြကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေးကို စမတ်စီးတီးအလားအလာကောင်းသော မြို့အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရပြီးနောက် နည်းပညာအသုံးပြု
လီဂျောင်ဆွတ်နဲ့ လီနာယန်းတို့က '' Romance IsaBonus Book ''စီးရီးရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် ဓာတ်ပုံများကို ဝေမျှခဲ့
The Voice Myanmar Season2သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စတင်မည်
မြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဟံသာဝတီဦးအုန်းကြိုင် ပြန်လည်ရွေးချယ်ခံရ
ဆိုင်ကယ်ခိုးမှု မသင်္ကာသူအား စစ်ဆေးရာမှ ဆိုင်ကယ် ၁၂ စီးခိုးမှု ထပ်မံပေါ်ပေါက်၍ ဖမ်းဆီး
ပုသိမ်တွင် အထည်ချုပ်လုပ်သား ၁ဝဝဝ ခန့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်
ဗီယက်နမ် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူကို ထောင်ဒဏ်နှစ် ၂ဝ ချမှတ်